2012-05-20 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Billion Chords-The Most Powerful Guitar Chord Dictionary in the World!
Rapp3rး​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ ​ဂစ်​တာ​လက်​ကွက်​တွေ​က ​မ​ရ​တော့​ဘူး download ​လုပ်​လို့ ​နောက်​ထပ် ​တင်​ပေး​ပါ​ဦး. ​ကျွန်​တော် ​လက်​ကွက် ​အ​သစ်​တွေ​ကို ​သိ​ချင်​လို့​ပါ။
Billion Chords Features List
• Ability to find any chord possible
• Ability to construct any chord by choosing the abbreviations onalist
• Ability to listen the chords sound
• Ability to change the sound by choosing an instrument
• List of all synonyms of each chord
• Drawing of the chord along the virtual fret diagram
• You can chooseacommon tuning
• You can change to your personal tuning
• Find chords and omit barre chords
• Display only easy chords
• Choose the max distance between your fingers
• Choose the maximum fret # to display the chord charts
• Ability to display to left-handed chords
• Change the bass note for any chord
• More than 1 Billion combinations available
• Omit5and omit3in any chord
Ifile | Mediafire | Minus
uniblue Driver scanner 2012 version 4.0.7.1 (​နောက်​ဆုံး​ထွက် ​ဗား​ရှင်း)
​ဒီ​တစ်​ခါ Driver ​အ​ခက်​အ​ခဲ ​ဖြစ်​နေ​သူ​များ​အ​တွက် ​တစ်​ခြား driver ​ရှာ​တဲ့ program ​တွေ​ထက် ​ကောင်း​တဲ့ driver scanner ​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​နောက်​ဆုံး​ထွက် version ​ပါ. ​ကျွန်​တော် ​ကိုယ်​တိုင် ​ခု​န​က​ပဲ ​စမ်း​ပြီး​တော့ Download ​လုပ်​လို့ ​မ​ရ​တဲ့ window7​အ​တွက် driver ​ကို install ​လုပ်​လိုက်​တာ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပါ​တယ်. Dell ​နဲ့ fujitsu ​အ​တွက်​ပါ. ​အား​လုံး​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​ထည့်​ရ​မယ့် serial number ​တွေ​ကို ​အ​များ​ကြီး ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. ​တစ်​ခု​နဲ့ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ ​ရင် ​နောက် ​တစ်​ခု​နဲ့ ​ထည့်​ပါ. ​ပြော​စ​ရာ​တစ်​ခု​က​တော့ ​သူ့​ကို active ​ဖြစ်​ဖို့​အ​တွက် internet ​တော့ ​လို​အပ်​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. internet ​မ​ချိတ်​ပဲ​နဲ့​တော့ active ​မ​ဖြစ်​ပါ​ဘူး. ​ကဲ​လို​ချင်​ရင် ​အောက်​မှာ download ​လုပ်​လိုက်​ပါ.
​ပ​ထ​မ​ဦး​စွာ active ​ဖြစ်​ဖို့ key ​ထည့်​ပါ
Driver ​ကို Scan ​လုပ်​ပါ။
​လို​အပ်​သည့် driver ​များ​တွေ့​လျှင် Download All ​ကို ​နှိပ်​ပြီး Download ​လုပ်​ပါ။
Download ​လုပ်​ပြီး​လျှင် ​လုပ်​ပြီး​သည့် link ​ရဲ့ ​အ​လယ်​တည့်​တည့်​မှာ install ​ဆို​တာ ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. install ​ကို​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ။ ​ဒါ​ဆို​ရင် ​လို​အပ်​တဲ့ driver ​တွေ ​အ​လို​အ​လျှောက် ​ရ​ရှိ​သွား​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ​မှာ install ​လုပ်​ပြီး​ရင် restart ​ချ​ခိုင်း​တတ်​ပါ​တယ်. restart ​ချ​ပေး​လိုက်​ပါ. ​အ​စ​က​နေ ​ပြန်​ပြီး download ​လုပ်​စ​ရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး. Driver scanner program ​ပြန်​ပေါ်​လာ​တာ​နဲ့ ​ခု​န​က Download ​လုပ်​နေ​တဲ့ ​နေ​ရာ​က​နေ ​ကျန်​တဲ့ Driver ​တွေ​ကို ​ဆက်​ရှာ​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​ပြီး​တဲ့ driver ​တွေ​ကို​သာ install ​လုပ်​နေ​လိုက်​ပါ။
Billion Chords-The Most Powerful Guitar Chord Dict...
uniblue Driver scanner 2012 version 4.0.7.1 (​နောက...